Rae Carruth ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
Rae Carruth Sacramento, California မှာ, ဇန်နဝါရီလ 1974 ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်နှင့်သူ၏ဆယ်ကျော်သက်သို့သူတစ်ဦးအာရုံရှိသည်ဖို့သလိုပဲ; သူဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးကစားသမားဖြစ်ချင်တယ်။ သူအားလုံးသည်အမေရိကန်နှင့်သူ၏အတန်းဖော်တွေနဲ့လူကြိုက်များတဲ့အထက်တန်းကျောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Academic သူရုန်းကန်ပေမယ့်နောက်ဆုံးတွင်သူကောလိပ်ကျောင်းမှတစ်ဦးအားကစားပညာသင်ဆုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Carruth 1992 ခုနှစ်တွင်ကော်လိုရာဒိုတက္ကသိုလ်မှကျယ်ပြန့်လက်ခံအဖြစ်စုဆောင်းခဲ့သည်။
အဲဒီမှာနေစဉ်, သူသည်မိမိအမှတ်ပျမ်းမျှအားထိန်းသိမ်းထားနှင့်မျှမတို့စည်းကမ်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ 1997 ခုနှစ်, ကာရိုလိုင်းနား Panther သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဘက်စုံမူကြမ်းရွေးအတွက် Carruth ရွေးချယ်ထားကြသည်။ အသက်အရွယ် 23 မှာသူတစ်ဦးမှ စတင်. ကျယ်ပြန့်လက်ခံအဖြစ် $ 3.7 သန်းဖြင့်လေးနှစ်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ 1998 ခုနှစ်တွင်, သူ့ခါးပတ်အောက်မှာရုံတစျခုရာသီနှင့်အတူ, မိမိခြေမကိုဖဲ့။ 1999 ခုနှစ်တွင်သူသည်မိမိအခြေကျင်း sprained သူသည် Panther ဖို့တာဝန်ယူမှုဖြစ်လာခဲ့ကောလာဟလများရှိခဲ့သည်။
Rae Carruth များစွာသောမိန်းမရက်စွဲပါ။ ငွေရေးကြေးရေး, သူ့ကတိကဝတ်သည်သူ၏လစဉ်ဝင်ငွေကျော်ဖြတ်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။ သူသည် 1997 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးဖခင်ဖြစ်ကြောင်းဝတ်စုံကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့် $ 3500 တစ်လ၏ကလေးအထောက်အပံ့ငွေပေးချေရန်ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ သူလည်းမကောင်းတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ပိုက်ဆံတင်းကျပ်စွာရတဲ့ခဲ့ပါတယ်နှင့်သူ၏ဒဏ်ရာနှင့်အတူ, သူ့အနာဂတ်သူ့ကိုသက်ဆိုင်ရာ။ ဒါဟာသူ 24 နှစ်အရွယ် Cherica အဒမ်ကသူ့ကလေးနဲ့အတူကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်သင်ယူသောဤအချိန်ကာလအတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပေါ့ပေါ့အဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်နှင့် Carruth အခြားအမျိုးသမီးချိန်းတွေ့ရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။
Cherica ဒမ်နောက်ဆုံးမှာ Charlotte မှပြောင်းရွှေ့ဓမ္မရာဇဝင်တောင်တန်း, မြောက်ကာရိုလိုင်းနားထဲမှာကြီးပြင်းလာတယ်။ အဲဒီမှာသူမပြီးတော့တစ်ဦးထူးခြားဆန်းပြား dancer ဖြစ်လာခဲ့သည်နှစ်နှစ်ကောလိပ်သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူမသည် Carruth တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှစ်ခုနှင့်အနောက်တိုင်းချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့သည်။ သူမကိုယ်ဝန်ဖြစ်လာခဲ့သည်အခါ, Carruth အနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရှိသည်ဖို့သူမကိုမေးသော်, ဒါပေမယ့်သူမကငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
သူမ၏မိသားစုသူမရဲ့မွေးသေးသောသားအဘို့နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဓိပတိရွေးချယ်ရာတွင်တစ်ဦးကလေးရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ဟုဆိုသည်။ သူမသည် Carruth သည်သူ၏ခြေကျင်းကိုထိခိုက်စေပြီးနောက်, သူဝေးလံသောဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်း, မိတ်ဆွေများကိုပြောကြားခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာ 15, 1999 တွင်အဒမ်နှင့် Carruth ရက်စွဲတစ်ခုအဘို့အတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒီအဒမ်သူမ၏ကိုယ်ဝန် Carruth အကြောင်းကြားပြီးကတည်းကသာသူတို့ရဲ့ဒုတိယရက်စွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကတောင် Charlotte အတွက် Regal ရုပ်ရှင်ရုံမှာ 9:45 pm တွင်ရုပ်ရှင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ကျော်ခဲ့တဲ့အခါသူတို့ကသီးခြားကားများ၌ကျန်ကြွင်းများနှင့်အဒမ် Carruth နောက်ကွယ်မှနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ရုပ်ရှင်ရုံထွက်ခွာ၏မိနစ်အတွင်းမှာပဲကားတစ်စီးဘက်အဒမ်တစ်လျှောက်တွင်ဖွင့်မောင်းနှင့်နေရာချထားတဦးသူမ၏မှာတိုက်ရိုက်သည်သူ၏သေနတ်ပစ်ခတ်စတင်ခဲ့သည်။ သူမသည်အရေးပါသောအကိုယ်တွင်းအင်္ဂါမထိခိုက်စေ, သူမ၏နောက်ကျောသို့လေးခုကျည်ဆန်နှင့်အတူလုပ်ကြံခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါ 911 ခေါ်ရန်:
နာကျင်မှုအတွက်ရုန်းကန်နေရ, Cherica 9-1-1 ခေါ်ဆို။ သူမသည်ဖြစ်ပျက်ဘာ dispatch ပြောသည်နှင့်သူမ Carruth အဆိုပါပစ်ခတ်မှုအတွင်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ခံစားခဲ့ရကြောင်း။ နာကျင်မှုထဲကနေမျက်ရည်နှင့်တကွ, သူမက Carruth ရဲ့ကလေးနဲ့အတူခုနစ်လကိုယ်ဝန်ရှိခဲ့ကြောင်းရှင်းပြသည်။ ရဲတွေရောက်လာတဲ့အချိန်ကိုအသုံးပြုပုံမျှသံသယရှိသူကိုတွေ့ခံရဖို့နဲ့အဒမ်ဟာကယ်ရိုလိုင်းနားရဲ့ Medical Center မှအမြန်ပို့ခံခဲ့ရသည်ခဲ့ကြသည်။ သူအချိန်မတန်မီ 10-ရက်သတ္တပတ်ခဲ့သော်လည်းသူမသည်ချက်ချင်းခွဲစိတ်ကုသသို့သွားလေ၏နှင့်ဆရာဝန်များကသူမ၏ကလေးယောက်ျားလေး, အဓိပတိ Lee ကကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
သူတို့အားမှတ်စုမှာတော့သူမကသူမသေစေနိုင်သောကျည်ဆံလွတ်မြောက်ရန်နိုင်ဘူးဒါကြောင့် Carruth သူမ၏ကားကိုပိတ်ဆို့ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ။ သူမသည် Carruth တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာရှိကွောငျးကိုရေးသားခဲ့သည်။ သူမ၏မှတ်စုနှင့်အခြားသက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အခြေခံပြီး, ရဲကျူးလွန်လျှို့ဝှက်ကြံစည်ခဲ့များအတွက် Carruth အဖမ်းခံရ ပထမဦးဆုံးဒီဂရီလူသတ်မှု , ကြိုးစားခဲ့လူသတ်မှုနှင့်သိမ်းပိုက်ထားသောမော်တော်ယာဉ်သို့ရိုက်ကူး။
ဒါ့အပြင်ဗန် Brett Watkins တစ်လေ့ရာဇဝတ်ပြစ်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်ခဲ့အဖမ်းခံရ; ကားရဲ့ယာဉ်မောင်းဖြစ်ဟုယုံကြည်ခဲ့သူမိုက်ကယ်ကနေဒီ, အဆိုပါပစ်ခတ်မှုအတွင်းကားတစ်စီး၏ခရီးသည်ထိုင်ခုံအတွက်သူနဲ့ Stanley အာဗြဟံ, ။ Carruth ဒမ်ဒါမှမဟုတ်ကလေးသေလျှင်သူရဲမှမိမိကိုမိမိပြန်ဖွင့်မယ်လို့သဘောတူညီချက်နဲ့ $3သန်းနှောင်ကြိုး posted သူလေးများ၏တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ 14 ရက်နေ့တွင်အဒမ်သူမ၏ဒဏ်ရာကနေသေဆုံးခဲ့ပါသည်။
Carruth ဟာ Off ယူ:
Carruth ဒမ်ကွယ်လွန်သွားကြောင်းတွေ့ရှိရသောအခါသူဂတိတော်ရှိသည်အတိုင်း, မိမိအထဲ၌လှည့်အစားမပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ FBI ကအေးဂျင့် Wildersville, TN အတွက်မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ကားများ၏ပင်စည်ထဲမှာသူ့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ချုပ်နှောင်ထားသို့သူ့ကိုတင်လိုက်တယ်။ ဒီပွိုင့်မှတက်သည် Panther ပေးဆောင်ခွင့်အပေါ် Carruth ခဲ့ပေမယ့်သူတစ်ဦးရမ်းပြေးဖြစ်လာခဲ့သည်တခါ, သူတို့ကကိုယ်တော်နှင့်အတူအားလုံးဆက်ဆံရေးပြတ်။
အဆိုပါတရားခွင် 72 မျက်မြင်သက်သေများကနေသက်သေခံချက်နှင့်အတူ 27 ရက်ကြာပါတယ်။
အဆိုပါအစိုးရရှေ့နေများ Carruth သူကလေးအထောက်အပံ့ပေးချေရန်မလိုချင်ခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဒမ်အသတ်ခံရှိသည်ဖို့စီစဉ်ပေးသူတဦးတည်းခဲ့ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။
ကာကွယ်ရေးပစ်ခတ်မှု Carruth ငွေကြေးထင်ပေမယ့်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာထဲကကျောထောက်နောက်ခံပြုခဲ့တဲ့မူးယစ်ဆေးသဘောတူညီချက်၏ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။
တရားစွဲဆိုမှုသူမကသေနတ်သံကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဒါ Carruth သူမ၏ကားကိုပိတ်ဆို့ဘယ်လိုဖော်ပြထားကြောင်းအဒမ်၏လက်ရေးမှတ်စုများ, လှည့်။ ဖုန်းနံပါတ်မှတ်တမ်းများပစ်ခတ်မှု၏အချိန်ပတ်လည်ကနေဒီ, ပူးတွဲခုခံကာကွယ်ဖို့ Carruth ကနေဖန်ဆင်းတော်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြသခဲ့သည်။
မိုက်ကယ်ကနေဒီ Carruth ဆန့်ကျင်သည်သူ၏သက်သေခံချက်ကိုအဘို့အကိုယ်ခံစွမ်းအားငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ မိမိအသက်သေခံချက်စဉ်အတွင်းသူကလေးအထောက်အပံ့ပေးချေရန်ရှိသည်ဘူးဒါ Carruth ဒမ်သေပြီလိုခငျြသူကပြောပါတယ်။ သူလည်းအဒမ်ကားတစ်စီးပိတ်ဆို့ခြင်း, Carruth အခင်းဖြစ်ပွားရာမှာဖွစျကွောငျးကိုသက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။
Watkins သည်သေနတ်ပစ်ခတ်မှုစွပ်စွဲလူတစ်ဦးကိုလက်ခံ အသနားခံ bargain အစားသေဒဏ်၏အသက်လဲလှယ်အတွက် Carruth တဘက်၌သက်သေခံရန်။ အစိုးရရှေ့နေဘာလို့လဲဆိုတော့သူ Carruth လူသတ်မှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခဲ့တဲ့ရဲအရာရှိ၏လက်ထောက်အားပေးသောကြေညာချက်၏ရပ်တည်ချက်မှသူ့ကိုမခေါ်ခဲ့ပါဘူး။
သူ Carruth တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသဘောတူညီချက်အပေါ်ထွက်ကျောထောက်နောက်ခံကိုသူတို့ကအကြောင်းသူ့ကိုပြောပြရန်သူ့ကိုနောက်တော်သို့လိုက်ဟုဆိုသည်။ သူကသူတို့ Carruth ခေါင်းနှစ်လုံးခဲ့သည်ဘယ်မှာထွက်ရှာတွေ့မှအဒမ်ကားတစ်စီးမှတက်ဆွဲများနှင့်အဒမ်ကသူတို့ကိုရန်ညစ်ညမ်းသောအမူအရာလုပ်ကဆိုသည်။ Watkins သူကဆုံးရှုံးခဲ့ရရုံရိုက်ကူးစတင်ကပြောကြားသည်။ ကာကွယ်ရေးအတွက်ရပ်တည်ချက်မှ Watkins ကိုခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, ဒါပေမယ့် Watkins သည်သူ၏အသနားခံသဘောတူညီချက်မှကပ်, တကမူးယစ်ဆေးသဘောတူညီချက်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဘာမှပြောနေအစဉ်အဆက်ငြင်းဆိုထားသည်။
Ex-ရည်းစား, Candace Smith က Carruth သူပစ်ခတ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူမ၏ဝန်ခံပေမယ့်သူကခလုတ်ဆွဲမပြုခဲ့ကြောင်းသက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။
25 ကျော်ကလူ Carruth ရဲ့ကိုယ်စားသက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။
Rae Carruth တစ်ခုသိမ်းပိုက်ထားသောမော်တော်ယာဉ်သို့ပစ်ခတ်, လူသတ်မှုကျူးလွန်ရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၏အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရကာမွေးသေးသောကလေးကဖျက်ဆီးဖို့လက်နက်သုံးပြီးထောင်ထဲမှာ 18-24 နှစ်အထိထောင်ဒဏ်ခဲ့သည်ခံခဲ့ရသည်။
Rae Carruth သတင်း - The New York Times
မာရီယာ del Rosio Alfaro ၏ပြစ်မှု
အဆိုပါ JonBenet ရမ်းဆေးလူသတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး
'' အဖိုးတန် Doe '' ၏ခေါင်းဖြတ်
Bonnie Lee က Bakley, မင်းသားရောဘတ် Blake က၏အသတ်ခံဇနီး၏ဘဝ
Karla Homolka နှင့်ပေါလု Bernardo ဓာတ်ပုံပြခန်း
အုပ်စုဖွဲ့ Tattoos ဓာတ်ပုံပြခန်း
အဆိုပါ Manson မိသားစုချားလ်စ် "Tex" Watson ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
က Nicholas Yarris: အပြစ်မဲ့သက်သေပြအချိန်အထိအကျဉ်း
Suzanne Basso ၏ပြစ်မှု
အဆိုပါပျားအုံ Cluster Find
ခရက်ဒစ်ကဒ်များငွေ Form ကိုဖြစ်ပါသလား
Mociónမသန်စွမ်း reabrir un caso က de deportación
အလှဆင် Logical မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ် Stacking
သင့်ရဲ့စာအုပ်ကလပ်ချောချောမွေ့မွေ့ Run Make မှစည်းကမ်းများ
အဆိုပါ 2000 ၏အကောင်းဆုံး MLB အိုး
ချားလ်စ် Garnier ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဆိုပါ Baekje ခင့်နိုင်ငံတော်ကဘာလဲခဲ့သလား
စပိန် preposition '' Desde '' အသုံးပြုခြင်း
Knight - အမည်အဓိပ္ပာယ်နှင့်မူလအစ
တစ်ဦးကျောင်းသား Portfolio တည်ဆောက်ခြင်း5ခြေလှမ်းများ
အီတလီအတွက် partition အပိုဒ်အသုံးပြုနည်းလိုက်တဲ့အခါ
Juz '' 30 ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏